पुण्य गौतमको दुई दिनको टिकटकको कमाइ कति ? अंशु वर्मासमेत चकित ! - Nepalese Times
राजेन्द्र पाण्डे बन्ने भए वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री, शालिकराम जम्मकट्टेलले गरे यस्तो प्रस्ताव ! 50 मिनेट अघि
नेप्लिज संवाददाता १२ आश्विन २०७८, मंगलवार १७:२८ (3 हप्ता अघि) २०२ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । पुण्य गौतम सामाजिक संजाल र संचारमाध्यममा नयाँ अनुहार होइनन् । समसामयीक विषयबस्तुमा विशेष गरेर युटूबमा अन्तर्वार्ता दिएर चर्चामा रहेका उनी अहिले भने एउटा फरक कामले चर्चामा रहेका छन् ।
केही दिनदेखि टिकटक लाईभमा बसेको भिडियो अहिले भाइरल बनिरहेको छ । युट्यूवरलाई अन्तर्वार्ता दिएर दिन बिताउने पुण्य गौतम यतिबेला टिकटकमा छाएका छन् ।
उनको टिकटकको दुईदिनको कमाइ बाहिरिएपछि टिकटिकबाट १४ महिनाको अवधिमा १ करोड बढी पैसा कमाएर चर्चामा आएका कञ्चनपुरका युवा अंशु बर्मा समेत चकित परेका छन् ।
पुण्य गौतम अचेल दिनरात टीकटकमा झुण्डिइरहेका हुन्छन् । टीकटक लाइभमा बसेकै भरमा मनग्गे आम्दानी गर्न सकिने चाल पाएपछि गौतम अरु सबै कामधन्दा छाडेर यसमा होमिएका हु्न् ।
उनलाई छोटो समयमै फलिफाप भएको छ । तीन दिन लाइभ बस्दा करिब २ लाख रूपैयाँ आम्दानी भएको उनले बताए । कञ्चनपुरका अंशु बर्मा नाम गरेका युवकले १५ महिनामै टीकटकबाट करोड कमाएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा भइरहेको थियो । उनलाई फ्लप पार्ने गरी पुण्य गौतम उदाएका छन् ।
उनले भने – ‘ ‘त्यसपछि त मलाई रस पसिहाल्यो, अब समय मिलेसम्म बसिन्छ ।’ श्रीमतीको प्रेरणाले आफू टीकटक लाइभमा बस्न थालेको गौतमले बताए । उनले भयसभित्रका प्राविधिक पक्षहरुबारे आफूलाई केही पनि जानकारी नभएको र श्रीमतीले नै सबै सिकाएकोसमेत बताएका छन् ।
गौतमले एक चर्चित मिडियामा दिएको अन्तरवार्तामा भनेको कुराकानी यस्तो छःः
इमान्दारितापूर्वक भन्नुपर्दा म योजनाबद्ध तरिकाले आएको होइन । अस्ति शुक्रबार के भयो भने श्रीमतीजीले ‘एकछिन फ्रेस हुनुप¥यो लाइभमा बसौं’ भन्नुभयो । ल न त भनेर बसेँ । म देखिनासाथ एकैचोटि ४–५ हजार जोडिन आउनुभयो । लाइभमा आउनेहरूले धमाधम उपहारहरू फ्याँक्नुहुने रहेछ । मलाई त यस्तो हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन । गजबै लाग्यो । अनि त म ९ बजेदेखि लाइभ बसेको मान्छे बिहान साढे पाँच बजे मात्रै उठेँ ।
त्यतिञ्जेलमा मरोमा ३ लाखजति लाइक आएछ । एकचोटिमा १२ हजारसम्म जोडिन आउनुभयो । तपाईंले हेर्नुभएको होला त्यो बेला निद्राले आँखा पनि राताराता भएका थिए । त्यसदेखि यता लगातार बसिरहेको छु । गजब मजा आइरहेको छ । हेर्नुस्, अरुले हेर्दा जाबो लाइभ बस्ने त हो नि भनेजस्तो देखिन्छ । तर, यो सजिलो काम होइन । यसमा धेरै दुःखकष्टहरू छन् । धैर्यता चाहिन्छ । लगातार बोलिरहने सामर्थ्य चाहिन्छ । र, सबैभन्दा मुख्य कुरा त सेन्स अफ ह्यूमर चाहिन्छ ।
मेरो सेन्स अफ ह्यूमर तपाईंलाई थाहा नै छ । मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् कि भरतमणि पौडेल कमेडी च्याम्पियन भए पनि पुण्य गौतमले जति हँसाउन सक्दैन । म आफ्नो सेन्स अफ ह्यूमरले सबैलाई लाइभमा अड्याएर राख्न सक्छु । सबैमा यस्तो क्षमता कहाँ हुन्छ भन्नुस् त रु